Microsoft Disability Scholarship 2021/2022 Kunyorera Portal Kwidziridzo: Yazvino Chikoro Nhau
Microsoft Disability Scholarship: Iyi fundo ndeyekufundira yakagadzirirwa kubatsira avo vakaremara. Nekudaro, kana iwe uine chero fomu yehurema iwe unofanirwa kutora urwu ruzivo zvakanyanya. Verenga kuburikidza nechinyorwa ichi kuti udzidze zvakawanda nezve iyi Microsoft hurema hwekufunda. Vimba neni, iwe uchafara kuti iwe wakazviita.
Zvinangwa zveMicrosoft Disability Scholarship
The Microsoft yakaremara kudzidza inopa imwe yemamishini eMicrosoft. Uye ichi chinangwa ndiko kugadzirwa kwemuchinjikwa wakaremara mushandi masosi eboka. Uye iri boka nderekupa simba nekugonesa vanhu vakaremara.
Uyezve, iyi dzidziso inogonesa chikoro chepamusoro vadzidzi vakaremara kuenda kukoreji uye kunanga basa muindasitiri yehunyanzvi.
Pamusoro pezvo, inotarisira kubatsira mukuwedzera dziva revanhu vanorarama nehurema vachinyoresa mune dzidzo yepamusoro. Zvakare, uye, mukufamba kwenguva, dzikisa iyo urovha kusarura kwehuwandu hwevanhu.
Ndiani Anokodzera Kunyorera ichi kudzidza?
Dzidzo yeMicrosoft yekuremara ichapihwa kune vanovimbisa vakuru vezvikoro zvepamusoro. Nekudaro, ivo vanofanirwa kuronga kuenda kukoreji kana yekoreji kosi. Zvakare, inofanirwa kuve nemari yaunoda.
Microsoft Akaremara Scholarship Worth / Batsirwa
Huwandu hweizvi zvinowedzerwazve kudzidza kupihwa kupihwa $ 5,000 pagore. Zvisinei, inosvika pamadhora zviuru makumi maviri.
Zvakare, iyi mari inobhadharwa kuburikidza neSeattle Foundation. Uye iri pachinzvimbo chehurema hweVashandi Resource Group (ERG) kuMicrosoft. Izvi zvinoitirwa kuchikoro chemubatsiri's Financial Aid Office.
Zvinodikanwa zveMicrosoft Disability Scholarship
Kuti utariswe seMicrosoft Urema Scholarship, unofanirwa:
Iva iyezvino wepamusoro chikoro chepamusoro unogara nehurema. Zvisinei, izvi zvinotsanangurwa ne WHO. Nekudaro, hurema hunogona kuve hwekuona, kunzwa, kufamba, kugona kuziva, kutaura kana kumwe kuremara.
Zvakare, ronga kuenda kune undergraduate chirongwa. Uye izvi zviri mu2 kana 4-gore-University / Koreji kana technical Koreji. Zvakare, izvi zvinofanirwa kunge zviri mukudonha kwegore redzidzo zvichitevera kupedza chikoro chepamusoro.
Uyezve, chikoro chakashandiswa chinofanirwa kunge chiri muUSA. Kana kuve neUSA-Inobatanidza yekushambadzira kwemari. Nekudaro, kuti uwane ruzivo, unogona kubata Seattle Foundation kuti uone kukodzera isiri-USA chikoro.
Pamusoro pezvo, zivisa chakabvumidzwa chikuru muinjiniya, sainzi yemakomputa uye masystem eruzivo rwecomputer. Zvakare, mumutemo, bhizinesi, kana imwe ndima inoenderana. Semuenzaniso, vepamutemo, pre-mutemo, mari, bhizinesi manejimendi, kana kushambadzira.
Zvakare, ratidza kuda kwehunyanzvi.
Uyezve, ratidza hutungamiriri kuchikoro uye / kana munharaunda.
Zvakare, uve nechikoro chepamusoro chinowedzera GPA ye3.0 kana yepamusoro.
Pamusoro pezvo, inoda rubatsiro rwemari kuti uende kukoreji.
Zvakare, chinzvimbo chekunyoresa chinofanirwa kuve chizere-nguva kana hafu-yenguva.
Maitiro Ekushandisa kweiyi Scholarship
Kunyorera kuremara kweMicrosoft kudzidza, cherekedza. Email zvinhu zvinotevera ku [email inodzivirirwa]:
SummaryCV yako inofanira kusanganisira zvinotevera ruzivo: Zvimwe zviitiko zvekunze. Zvakare, kukudzwa uye mibairo iyo iwe yawakagamuchira. Nekudaro, kana zvichibvira, sanganisira mibairo inoenderana nehunyanzvi. Uye ruzivo rwebasa
inopangidza: Sanganisira kopi isiri yepamutemo yechinyorwa chako chazvino chedzidzo. Zvakare, kana ikasarudzwa semugumo, tarisa. Mubhizimisi achada kupa Seattle Foundation nemitemo yepamutemo.
Zvitatu Zvinyorwa: Ndokumbira kuti ushanyire kudzidza kunongedzera kuti udzidze zvakawanda nezve matatu (3) zvinyorwa.
Tsamba mbiri dzekukurudzira: Tsamba imwe chete inofanirwa kunge ichibva kunharaunda kana mushandi pachikoro chako. Zvakare, tsamba dzekurumbidza dzinofanirwa kunge dziri dzepakutanga uye hadzifanirwe kunge dzakadzokororwa tsamba dzekurumbidza kukoreji. Usasanganise hama sereferenzi.
Zadza Fomu Rekunyorera: Uyezve, zadza iyo Fomu Rekunyorera rese panoperera peji ino. Zvakare, iwe unogona kutaipa ruzivo kana kupurinda zvakajeka. Zvisinei, unogona dhawunorodha iyo Microsoft yekuremara kudzidza kunyorera HERE.
Izvo zvakakosha kuti urangarire izvi. Ndokumbira utumire email zvese zviri pamusoro kuti [email inodzivirirwa]. Zvakare, ndokumbira uve nechokwadi chekuti rako rekushandisa packet rinosanganisira zvese ruzivo runodiwa uye magwaro usati watumira.
Microsoft haigamuchire mamwe magwaro anotumirwa akapatsanurwa nepakeji rekutanga chikumbiro. Zvakare, chete akazara ekunyorera mapakeji anozoongororwa. Nekudaro, avo vakasarudzwa kuti vagamuchire Microsoft hurema Scholarship vachaziviswa mukupera kwaApril.
Webhusaiti yeScholarship: ShandisaIYA
Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo Nezve Microsoft Kuremara Scholarship
Pazasi pane mimwe yemibvunzo inowanzo bvunzwa nezve iyi kudzidza:
1. Ini ndinofanira here kuva mugari wemuUS kuti ndinyore?
Kwete. Vese vadzidzi vechikoro chesekondari vanogara nehurema vane kudiwa kwemari vanokurudzirwa kunyorera.
2. Ini ndinofanira kuenda kuChikoro (Koreji / Yunivhesiti, nezvimwewo) muUSA?
Kwete hazvo. Nekudaro, iwe unofanirwa kuenda kuchikoro kungave kuUSA, kana chikoro chaunopinda chinofanirwa kuve nehukama hweUS hwekutengeserana kwemari. Zvakare, unogona kubata [email inodzivirirwa] kuongorora zvikoro zvisiri zveUSA 'kukodzera.
3. Ndingaenda Kunharaunda Yemunharaunda Koreji?
Ehe. Chero bedzi purogiramu yako yepasikiriyasi ichizadzisa zvinodiwa.
4. Ini ndinogona kutumira tsamba muKunyorera Kwangu uye Magwaro Anotsigira?
Iyo Seattle Foundation
5. Iyi Scholarship Inovandudzwa?
Ehe. Zvakare, vanogamuchira mubairo vanogashira $ 5,000 pagore rechikoro. Uye kusvika pamadhora zviuru makumi maviri zvemubairo.
6. Kune here iyo Internship kana imwe Microsoft Chiitiko Chirongwa Yakabatana neiyi Renewable Scholarship?
Kwete panguva ino. Nekudaro, sezvo homwe inowedzera, Microsoft inochengetera kodzero yekugadzira kugadzira zvirongwa zvakadaro.
Izvi zviri pamusoro ndeimwe yeruzivo rwakakosha iwe yaunofanirwa kuve nayo nezve izvi kudzidza. Nekudaro, iwe unobvumirana neni iwo mukana usingawanzoitika, kunyange kuchine zvinodiwa kuti vanyoreri vanofanirwa kusangana.
Inzwa wakasununguka kunyorera. Zvakare, ita izvozvi kuti umire mukana uchipesana nenguva yakatarwa. Nekudaro, kuti uwane zvimwe zvakawanda, ndapota shanyira iyo webhusaiti webhusaiti. Zvakare, iwe unogona zvakare kushanyira iyi peji rewebhu.
Gonda PhD Mudzidzi Grant Chirongwa 2017 - Netherlands
AVID HR Kubvunzurudza Kuchengeta 2020/2021 Kunyorera Fomu Portal
Ndege Anopinda Mubvunzurudzo Mibvunzo neMhinduro 2021
Kupona Kwemabhizimusi uye Kukura Maitiro mune Yemakwikwi Bhizinesi Nharaunda
BSUM Postgraduate Kubvuma Mari 2018 - Maitiro Ekubhadhara
Zvinowanikwa Varaidzo Yakatemerwa Job Portal 2019 | www.neworleanscareer.com
Mabasa muPort Harcourt kuEnergi Talent Resourcing - Gunyana 6th 2016
« Yakanyatsobhadharwa Scholarship 2021 yeVadzidzi Vepasi Pose Fomu Portal
JAMB CBT App 2021 Ona Maitiro EkuDhawunirodha Yemahara uye Yekudzidzira Guides »